I-Figma: Uyilo, iPrototype, kunye nokuSebenza kumashishini onke | Martech Zone
I-Figma: Uyilo, iPrototype, kunye nokuSebenza kumashishini onke
NgoLwesithathu, Julayi 31, 2019 NgoLwesibini, Julayi 30, 2019 Douglas Karr
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, bendincedisa ekuphuhliseni nasekuhlanganiseni imeko ye-WordPress elungiselelwe umthengi. Kukulinganisela kwesitayile, ukwandisa iWindowsPress ngamasimi esiko, iintlobo zeposi zesiko, isakhelo yoyilo, umxholo womntwana, kunye neeplagi zesiko.
Elona candelo linzima kukuba ndiyenza ukusuka kwiindlela ezilula zokungena kwiplatifomu yokuprinta. Ngelixa liqonga eliqinileyo lokuboniswa kunye noyilo, aluguquleli ngokulula kwi-HTML5 kunye ne-CSS3. Yongeza konke okunye ukuphinda-phinda, kwaye iintsuku zam ziyakhathaza ngenkqubela phambili icotha kakhulu.
Inxalenye enye yephazili kukuba iarhente yoyilo imane inikezela ngeeprototypes, ngaphandle kokubonelela ngalo naluphi na uhlobo lwephepha lesiqhelo lesitayile… ke sisebenzela ukufezekisa oko ngokuthumela ngaphandle iiprototypes indiza, Kwaye emva koko uguqulele i-CSS kwi-WordPress. Inani lamanyathelo ayimfuneko kunye nezikhewu phakathi kwamaqonga ziyenza inkqubo enzima. Ungasathethi ke ngokuzama ukwenza lula izinto ezintsonkothileyo ngesantya kunye nokusilela
Umzobo yazisa ikakhulu lo msebenzi ngeqonga elenza uyilo, ingxelo kunye nentsebenziswano kwilungu ngalinye leqela lakho, kubandakanya:
Abayili Sebenzisana kumxholo nangexesha lokwenyani. Ungaze ube nexhala lokuba iifayile zakho ziphelelwe lixesha okanye zibhale ngaphezulu komnye nomnye.
Abachaphazelekayo -Thumela ikhonkco ukuze uqokelele ingxelo, ufumane izicelo zotshintsho, kwaye uvumele abachaphazelekayo ukuba benze uhlaziyo lwekopi kuyilo lwakho.
ababhekisi -Ienjineli zihlala zinokufikelela kumthombo wangoku-wenyaniso kwaye zinokuhlola izinto, ukuthunyelwa kwempahla, kunye nekhowudi.
I-Figma inezinto ezithile ezizodwa:
Ukusebenza kweBoolean - Ngeefomula ezine: umanyano, ukuthabatha, ukudibana, kunye nokungabandakanyi, ungadibanisa nayiphi na iseti yeemilo ngokuchanekileyo.
amacandelo -Yakha ngokukhawuleza nangakumbi ngokungaguquguqukiyo ngezinto ezinokuphinda zisebenze nezinokutsha kwiifayile zakho. Fikelela kumaleko kwimeko nganye ukuze uhlele ngokufanelekileyo kwaye ubhale ngaphezulu umbhalo kunye nemifanekiso emgceni.
Izithintelo Yenza isikali uyilo lwakho ukuze ulingane nabuphi na ubungakanani bescreen ngokulungisa izinto kwisakhelo somzali, ngokuqhekeza into kwigridi, okanye nangokwenza izinto ezinobungakanani.
Iifowuni zeDivayisi -Nika uyilo lwakho kwindawo efanelekileyo. Unokukhetha phakathi komzobo kunye nemowudi yokuma komhlaba.
Ukusebenzisana -Yenza ukuba iiprototypes zakho ziphile ngokuchaza unxibelelwano kunqakrazo, ngelixa ujikeleza, ngelixa ucofa, nangaphezulu.
Ukugqithisa -Ukubeka ecaleni isihlobo kunye nokuzilawula ngesandla unolawulo olupheleleyo malunga nokuba zibekwe njani na ezi zinto zingaphaya.
Pixel-ukugqibelela -I-60fps yokuhlela ukusebenzisana ikulethela i-ultra crisp, imbonakalo ye-pixel-egqibeleleyo kunye nokuthumela ngaphandle.
Ukukhuselwa -Yakha ngokukhawuleza ukuhamba ngokudibanisa izikrini kunye nokongeza kwizinto ezinje ngokusebenzisana, utshintsho, ukugquma ngaphezulu, nokunye okuninzi. Endaweni yokuvumelanisa nezinye izixhobo mane wabelana nge-URL ukuze ufumane ingxelo.
Uyilo loMoya -Yolula ubeko lwakho kwaye ubone ukuba baya kuphendula njani kutshintsho kubungakanani bescreen.
U kuHlola -Vumela ethe tyaba, ethe nkqo, okanye naluphi na ulwalathiso oluskrola ngaphakathi kweemilo ezizodwa okanye isakhelo somzali siphela.
iZimbo -Ngqamanisa imibala, isicatshulwa, iigridi kunye neziphumo kuzo zonke iiprojekthi zakho. Gcina izitayile ezimbalwa zombhalo kunye nokulungelelanisa uyilo lwakho kwizixhobo ezahlukeneyo ngeendlela zegridi zeefigma.
Iilayibrari zeQela - Yabelana ngezinto kunye nezitayile kwiFigma-akukho mfuneko yeedrayivu ekwabelwana ngazo okanye izixhobo ezongezelelweyo. Wena neqela lakho nilawula ukuba zenziwe njani kwaye nini iinguqu ezikhutshelwa ngokuhamba komsebenzi okulula.
IiNethiwekhi zeVector -I-Figma yenza isixhobo sokubhala ukuba sibenomdla ngakumbi, sivumele ubuqhetseba ngokuthe ngqo ngelixa kugcinwa ukuhambelana ngasemva kunye neendlela.
kuba Shishini abathengi, iFigma inokuqhuba ukungaguquguquki, ukusebenza ngokukuko kunye nokhuseleko kwinqanaba. Iqonga lenza abathengi beshishini bakwazi ukulawula ngokulula iinkqubo zokuyila kunye neelayibrari zeqela kunye nokukwazi ukulayisha kunye nokwabelana ngamagama esiko kumbutho wakho. Ukungena ngaphakathi, ulawulo lokufikelela, kunye neelog zomsebenzi zibandakanyiwe.
I-Figma inokukhetha okukhulu kwezifundo abazigcinayo Isiteshi se YoutubeNantsi ividiyo eQalayo:
Umzobo inika abaphuhlisi amandla okuhlola, ukukopa, ukuthunyelwa kwempahla, kunye nokukopa i-CSS ngqo kwifayile yoyilo. Unako ukwenza ukuhamba komsebenzi okukhoyo ngokudityaniswa, kubandakanya indiza, Ukhuphelo, Jira, lwebhokisi, IProtoPie, yaye Siseko YeMac. Banayo i-API eyomeleleyo.
Zama iFigma mahala
tags: I-avocodenzisaneuyilouyilo lwentsebenziswanouyilo lwee mockupsibhokisi lehlayoumzoboJiraiimockupsinkqubozokulimaukusebenzisana komzekeloumbonoZeppelin
I-infographic: Ubalo lwaBantu aBantu abaDala lweSelfowni kunye ne-Intanethi yokuSebenzisa